Igbo, John: Lesson 118 - Jizọs gosiputara Meri Magdalini (Jọn 20:11-18) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 118 (Jesus appears to Mary Magdalene)
17 Jizos si ya, Eb͕ochilarom; n'ihi na alam akakwuru Nnam; kama jekuru umu-nnem, si ha, Mu onwem nārigokuru Nnam, na Nna-unu, na Chinekem, na Chineke-unu. 18 Mb͕e Meri Magdalini biara gwa ndi nēso uzọ-Ya na Ọ huru Onye-nwe-ayi, ihe ndị a nye ya.
Meri dara n'ihu Jisos n'ekpere, na-agbali isutu aka ya ma metu ya aka, ijigide ya ka o ghara ihapu ya. Jizọs mere ka ọ ghara imetụ ya aka n'ihi na ịhụnanya ya bụ ihe ime mmụọ. O nyewo ya olu ya na nnochi ya ma choro ka okwukwe nke ya di n'ile ya anya site n'inwe otu Atọ n'Ime Otu. Nke a ka o mere ka o doo anya na ọ ga-agwa ndị na-eso ụzọ ya okwu ihu ọchị n'oge na-adịghị anya. Na-emetụ ya aka, ma ọ bụ ịrapagidesi ike na ya ga-eme ka ya na ya dị n'otu, kama ọ bụ okwukwe na Mmụọ ime mmụọ ya nke na-eme ka ọ dịrị n'otu.
Jizọs gwara ya na ọ gaghị anọ n'ụwa mgbe ọ nwụsịrị; ọdịdị ya ga-adịgide adịgide dị ka ebe ikpeazụ ya bụ eluigwe. Ebum n'uche ya rịgoro na nloghachi nye Nna ya. Uzo ahu laghachikute Chineke we meghe uzo mgbe obosara onwe ya n'elu obe. Nnukwu Onye Nchụàjà a kpebiri ịchụ aja n'ọbara nye Onye Nsọ. Ọ na - agwa Meri, "Akwụla m n'ahụ, n'ihi na m ga - emezu ezi omume nile, m ga - ekpechitere gị arịrịọ, ma jupụta ike nke Mmụọ."
Okwu ya na-ekwu na ọ bụghị naanị ya, kama ọ bụ mmadụ nile, "Laghachinụ ndị na-eso ụzọ ma gwa ha na m dị, nzube na ịrịgogo n'eluigwe!"
Site na ozi a nye ndị na-eso ụzọ site n'aka Meri, ọ kasiri ha obi. Ọ kpọrọ ha ụmụnne. Site n'okwukwe anyi ghoro ya nwoke na nwanna, n'ihi obe ya na mbiliten 'onw na nd ebighiebi. Ọ na-akpọ anyị ụmụnna, ọ bụghị naanị ndị a hụrụ n'anya. Emezuru nzoputa, anyi ejikwara ikike nke ikwere anyi. O tinyere aka n'akwụkwọ nke ụmụ anyị nke Chineke na ọbara ya.
Gini bu ihe nke ozi ahu na Meri ghagwa ndi neso uzo okwu uzo? Nke mbụ, na ọ dị ndụ. Nzukọ ya na ya bụ akụkọ ihe mere eme. Nke abụọ, Nna ya bụkwa nke anyị; site na nkwa a Jizos mere ndi naeso ya ka ha soro Chineke nekorita anya. O kwughị banyere Chineke dị ka onye dị anya, onye dị ike na onye ikpe, mana Nna na-ahụ n'anya na nke dị nso. Ọ bụghị naanị Nna Kraịst, kama Nna anyị. Ọ kpọrọ Nna "Chineke m" dịka ya niile. Ọ nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi n'ebe Nna ya nọ, bụ ebe e kewapụrụ ihe nile e kere eke site n'aka Chineke site na mmehie. Ọ bụghịzi onye iro anyị n'ihi mmehie ndị gara aga, kama ọ hụrụ anyị n'anya, ndị mgbapụta nke obe ga-agbaghara ya. Dika ya na Nna ya no n'ime ya, ya mere o choro ka ayi biri n'ime Atọ n'Ime Otu site n'igwupụta Mmụọ Nsọ Ya, ka ịhụnanya wee si na anyị pụta.
Ya mere, Kraist mere nkwa nke nnweko zuru oke na egbugbere ọnụ nke nwanyi ahu nke huru ya mgbe o meriri onwu. O rubere isi; ọ nọgidere na-ada n'ala n'ụkwụ Jizọs n'ihi ọṅụ, kama o biliri wee gbakwuru ndị ozi na-agba àmà eziokwu ya. Ozi a, dị ka opi nke ọṅụ, jupụtara obi obi anyị taa. Ndi utọ emi ke ndinam ye Abasi ye ndifiak mbufo ama esịm fi? Ì kwere na ozi Meri dịka onye mbụ na-akpọsa ozi ọma na Kraist ebiliwo?
EKPERE: Anyị na-ekele gị, Onyenwe anyị Jizọs, na e si na ndị nwụrụ anwụ bilie, na anyị nọ, maka ịkpọ anyị ụmụnne gị. Anyị ekwesịghị ka anyị na gị nwee mmekọrịta chiri anya. Anyị na-ekele gị maka ịgbaghara mmehie anyị. Mee ayi ndi-ozi nke ọṅụ-Gi nye ndi nile nāchọ Gi.
Gịnị bụ ozi Kraịst na egbugbere ọnụ Meri Magdalin nye anyị?